“Waxaan farayaa Hay’adaha Amniga, in ay daba-gal buuxa ku sameeyaan, dadka ku hawlan dibin-daabyada dalka iyo abuurista colaad sokeeye” - Madaxweyne Siilaanyo - Somaliland Post
Home News “Waxaan farayaa Hay’adaha Amniga, in ay daba-gal buuxa ku sameeyaan, dadka ku...
“Waxaan farayaa Hay’adaha Amniga, in ay daba-gal buuxa ku sameeyaan, dadka ku hawlan dibin-daabyada dalka iyo abuurista colaad sokeeye” – Madaxweyne Siilaanyo
“Waxaan leeyahay musharixiinta tartamaysa, ha filanina in aad guulaysataan qudha. Hasa-yeeshee, waa in aad filataan, oo cindigiina gelisaan, guul iyo guul darro”.
“Waxaan leeyahay, ummadaha gobta ah, manfac ma wada deeqo, ee waxa wada deeqa milgaha iyo magaca ay wada leeyihiin.” – Madaxweyne Siilaanyo
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, ayaa ka qaaday muranka ka taagan natiijada doorashada iyo bannaan-baxyo xalay ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco, waxaanu ugu baaqay shacbiga inay ilaalinta ammaanka ka horeysiiyaan khilaafka siyaasiga ah ee Jira.
Md Siilaanyo waxa uu murashaxiinta ugu baaqay inay u hoggaansamaan natiijada ka soo baxda Doorashada isla markaana ay joojiyaan hadallada xanafta leh ee warbaahinta loo marinayo shacabka. Md Siilaanyo waxa uu sheegay inaan cidna la aqbali doonin, gacan bir ahna lagu qaban doono cid kasta oo iskudayda inay dalka xasiiloni-darro ka abuurto.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu dhinaca kale hambalyo u diray Ciidamada Ammaanka oo uu ku bogaadiyey dedaalka ay ugu jiraan ilaalinta ammaanka dalka. Sidaasna waxa lagu shegay war-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland oo xambaarsan baaqa Madaxweynuhu u jeediyey Xisbiyada siyaasadda, Shacabka iyo Ciidamada Ammaanka.
“Dhammaan, qaybaha kala duwan ee Shacbi-weynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Lab iyo Dhedig, Caruur iyo Ciroole, Miyi iyo Magaalo, Qurba-joog iyo Qol-qol-joog, Waxaan hawada u marinayaa salaan xambaarsan, nabadgelyo iyo naxariis Eebe, “Asalaamu Calaykum Wa Raxmatullaahi Wa Barakaatuhu”.